राजधानीमै सडक सास्ती, सम्बन्धित निकाय कसैले पनि सुनेनन् – Rajdhani Daily
राजधानीमै सडक सास्ती, सम्बन्धित निकाय कसैले पनि सुनेनन्
डाक्टर अनिल देवकोटा काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–५ लोलाङबाट पुरानो गुहेश्वरी, दगुर्नेपानी बाइपास–बालाजु हुँदै बसुन्धारा चौकीस्थित बीपी मेमोरियल अस्पताल दैनिक चारपटक आवतजावत गर्छन् । उनी आवतजावत गर्ने सवारीसाधन मोटरसाइकल हो । डा. देवकोटासँगै उनकी पत्नी पनि हरेक दिन बिहानै स्कुटर लिएर काठमाडौंको नरदेवीस्थित आयुर्वेदिक अस्पताल पुग्छिन् ।
घरबाट निस्कने अन्य सडकको विकल्प नहुँदा सडकमा हुने हिलो र सवारीसाधन चिप्लिने समस्याले यो जोडी बर्षा नहोस् भन्ने प्रार्थना नै गर्छन् ।
‘पानी परेपछि यस क्षेत्रमा न पैदल हिँड्न सकिन्छ, न सवारीसाधन नै चलाउन सकिन्छ,’ बीपी अस्पताल धाउने डा. देवकोटा गुनासो गर्छन् । बर्षा भएको बेला हिलोको सामना गर्नुपर्ने यो सडकमा अन्य बेला धुलोले सास्ती दिन्छ । उनले मुख्य सडकको नालीसमेत व्यवस्थापन नगरिदिएकाले जनजागृति चोकभित्रको बाटोसमेत हिलाम्मे भएको बताए ।
हाल ५ करोड ६० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुँदै गरेको गुह्येश्वरी, बोहोराटार–लोलाङ, धितालथोक हुँदै तीनपिप्लेस्थित काठमाडौं–त्रिशूली जोड्ने पासाङल्हामु राजमार्ग छिचोल्ने सडक निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइले अहिले यस क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्न सास्ती छ । सडक गत वैशाखअघि नै कालोपत्रे भइसक्ने हल्ला चलेको थियो । यसअघि केही ठाउँमा थालिएको ग्राभेलको कामसमेत त्यसै अलपत्र छ । ‘यो सडक होइन एक प्रकारको धराप हो,’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘यस्तो धरापमा ज्यान जोगाउने कि यात्रा गर्ने ?’
दुई वर्षदेखि थालिएको सडक निर्माणको काम बीचैमा अलपत्र परेपछि तारकेश्वर नगारपालिका–५ स्थित हरियाली समाजका अध्यक्ष रवीन्द्र पण्डित दिक्क छन् । सडकको दुर्दशा देख्दा दुरदराजको डगर पनि राम्रो देख्ने उनी हिँड्न नपरे हुन्थ्यो पनि भन्छन् । तर, विकल्प छैन ।
‘सम्बन्धित निकायमा बारम्बार सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि भनेका थियौं तर कसैले पनि सुनेनन्,’ उनको गुनासो छ ।
आजभोलि यो सडकमा दुर्घटनाको जोखिम हुँदाहुँदै पनि दैनिक नहिँडी नहुने बाध्यतामा छन् यस क्षेत्रका बासिन्दा । सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले समयमा निर्माणको काम नगरिदिएकाले अहिले यस सडकखण्ड मात्र नभएर काठमाडौंै उपत्यकालगायत मुलुकभरका सडकको अवस्थाको कथा कहालीलाग्दो छ ।
ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगर्दा अहिले बालाजु बाइसधारा– बाइपासदेखि तारकेश्वर क्षेत्रको मात्र नभएर काठमाडौंकै चाबहिल–जोरपाटी–गोकर्णेश्वरको साँखु सडकखण्डको अवस्था पनि उस्तै छ । बालाजुस्थित बाइसधारा पार्क प्रवेशद्वार अगाडिदेखि बाइपाससम्मको हिलाम्मे चिप्लो सडकका धेरै ठाउँमा ठूला ढल निकासमा प्रयोग भएको मंगलको बिर्कोसमेत नभएकाले अहिले यहाँको सडक यात्रा जोखिमपूर्ण छ । सडकको बीचभागमा ठाउँ ठाउँमा खाली छोडिएका ठूलाठूला भ्वाङभित्र खस्ने त्रासले स्थानयवासी निकै चिन्तित छन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३ का अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सडक खण्डको दुरावस्थाबारे स्थानीय निकायले माथिल्लो तहसँग समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताए । उनले केही दिनअघि मात्रै शंखरापुर, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहराका नगर प्रमुख, सहरी विकास मन्त्री, उपत्यका विकास प्राधिकरण, सम्बन्धित ठेकेदार र सरोकार समितिको संयुक्त पहलमा एक महिनाभित्र सडकको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको बताए । उनले अब एक महिनाभित्रै यहाँको सास्तीपूर्ण सडक बनाउने प्रतिबद्धता ठेकेदार कम्पनीले व्यक्त गरेको जानकारी गराए ।
सरकारले भने अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दुईदेखि तीन वर्षअघि ठेक्का लागेका सडकको म्याद एक वर्ष थपेको छ । कामै नभएका सडकदेखि निर्माण सकिन लागेका सडकका निर्माण व्यवसायीले थप एक वर्षको सुविधा पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबाट काम भएका विभिन्न सडकका १० वटा प्याकेजको एक वर्षसम्मको समय थप भएको आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाले ठेक्का लगाएको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकको चारवटा प्याकेज रहेको छ । चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकखण्डको चारवटा प्याकेज छन् । यसैगरी, लगनखेल–सातदोबाटो सडकका एउटा प्याकेज र बिजुली बजारमा निर्माण भइरहेको धोबीखोला पुलको गरी एकैपटक तीन सडकको नौ र एक पुलको गरी १० वटा ठेक्काको समय आगामी एक वर्षका लागि थप भएको हो ।
सडकको दुरावस्था राज्यलाई देखाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध युवाहरूले यो सडकमा माछा मारेर सांकेतिक विरोध गरे । कतिपयले धान रोपेरै विरोध जनाए । तर अवस्थामा तत्काल सुधार आउन सकेन ।
गत पुसमै समय सकिएदेखि असार मसान्तमा सकिने आयोजनाको समय थप भएको हो । यसैगरी, आयोजनाले ठेक्का लगाएको तीनकुनेस्थित बाग्मतीमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाइरहेको पुलसहितको अन्य आयोजनाको पनि समय थप हुने उनले बताए । ‘तीन वर्षअघि निर्माण तथा विस्तार सुरु भएका सडकको प्रगति काठमाडौंमै पनि निराशाजनक हुनु हाम्रै लागि पनि लाजमर्दो अवस्था हो,’ उनले भने ।
ठेक्का लगाएपछि डिजाइनको कारण ढिला भएका, साइट क्लियर नभएका, अदालतको आदेशले सडक निर्माण तथा विस्तार कार्य रोकिएका र राम्रो प्रगति गर्दागर्दै पनि समयमा नै नसकिएका आयोजनाको समय थप भएको उनले बताए । ठेक्का तोड्ने वा समय थपबाहेकको विकल्प नरहेकाले विभिन्न समस्याका कारण काम गर्न नपाएका र सरकारले नै साइट क्लियर गर्न नसक्दा काम हुन नसकेका आयोजनाको बाध्य भएर समय थप गर्नुपरेको उनले बताए । उपत्यकाभित्र र रिङरोडलाई जोड्ने यी सडक बनाउन दिएको समय सकिँदासम्म अधिकांशको प्रगति सन्तोषजनक नभए पनि बाध्य भएर समय थप गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, ठेक्का लागिसेकका योजना समयमा नै नसकिँदा ठेकेदारले थप समय खेल्न पाउने र सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने समय बढेको छ, जसका कारण अझै एक वर्ष ट्राफिक समस्या तथा वातावरणीय प्रदूषणसहितले निम्त्याउने विविध समस्याले मानवीय जीवन थप कष्टकर बनाउने देखिएको छ ।
थालिएका केही सडक निर्माणका काम अदालतको आदेशले रोकेको र गत वर्ष असोज पहिलो साता भएको अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म नआएकाले पनि म्याद थप गर्न बाध्य भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
विभागका सहप्रवक्ता रमेश सिंहले काम सम्पन्न नभएका आयोजनालाई म्याद थप नगरी भुक्तानी दिन अप्ठेरो परेको बताए । म्याद थप नगर्न साइट क्लियर नभएको र प्रगति कम भएकाले हर्जाना तिराएर काम गराउन पनि सम्भव नभएकाले म्याद थपको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । अदालतले आदेश दिइसकेको भए पनि त्यसका पूर्ण पाठ नआउँदा के निर्णय भएको छ भनेर पर्खनका लागि समय थप गरेर बस्नुपरेको विभागको दाबी छ ।
पहिले घरको मात्रै क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने भए पनि पछिल्लो समय जग्गाको समेत मुआब्जा माग गरेर स्थानीय संगठित विरोधदेखि अदालतसम्म पुगेका छन् । अदालतले घरसहितको जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्न आदेश दिएको थियो । तर पूर्ण पाठ कुर्नैपर्ने बाध्यताका कारण समय थप भएको विभागको दाबी छ । सम्बन्धित डिभिजनले ठेक्का लगाउने र उसैले समय थप गर्ने भएकाले अन्य स्थानको पनि आवश्यकताअनुसार समय थप भएको सो विभागले जनाएको छ ।